Maonero Emahara paYouTube | Zvemahara YouTube Likes | Emahara YouTube Comments
Tenga YouTube Tarisai Maawa
Tenga YouTube Puragi Ramba
Tenga YouTube Embed
Tenga Vanotevera Twitter
Maonero Emahara paYouTube | Yemahara YouTube Likes
Vanyoreri Vemahara paYouTube | Emahara YouTube Comments
#1 YouTube yekubatanidzwa chikuva kuti uwane emahara YouTube maonero, zvaanoda, makomendi & vanyoreri kubva kuvanhu chaivo!
Chinoshanda sei? Wana mari nekubatana nemamwe machaneli enhengo. Wobva wapinza mavhidhiyo ako muGoViral, sarudza masevhisi aunoda kugamuchira uye mukati memaminetsi, iwe unotanga kugamuchira maonero, kufarira makomendi & vanyoreri kubva kuvanhu chaivo, mahara!
Wana Yemahara YouTube Kukura Ikozvino! or Tenga YouTube Vanyori
Bhenefiti yekushandisa GoViral Mazuva ese
Chokwadi Kusununguka Kushandisa!
Nhoroondo yeprimiyumu sevhisi yemhando yemahara pamwe nesarudzo dzekukwidziridza pamubhadharo.
Inokupa Mahara Maonero, Anofarira, Vanyoreri & Makomendi
Yedu samambure inokutendera iwe nekukurumidza uye nyore kuwana mahara vanyori, maonero, kufarira uye makomendi Zvese zvaunoda!
Yakazvimirira YeYouTube Kukura
Pinda mavhidhiyo ako kunetiweki yedu uye isa huwandu hwebasa rega rega raunoda kugamuchira. Wobva waenda uye rega network yedu igoerekana yaunza zvese kwauri.
Inovandudza Organic Kukura
Kuwana vanyoreri, maonero, kufarira uye makomendi anobatsira kuwedzera ako ekutsvaga masosi, ayo anobatsira kuwedzera yako organic kukura uye kuita.
Tarisa pane zvako zvemukati uye kushuvira nepo network yedu ichipa kubatanidzwa kuchiteshi chako uye mavhidhiyo.
Super Nyore Kushandisa
Yedu interface inoshamwaridzika uye inozvitsanangudza. Kupinda, kupinza mavhidhiyo ako, sarudza huwandu hwevanyori, maonero, kufarira uye makomendi ekugamuchira uye wapedza!
Nyoresa Akaundi Yako Yemahara izvozvi
Tora mari nekutarisa mavhidhiyo uye nekuita navo.
Shandisa Mari Yako
Shandisa makoini ako kuti ugamuchire maonerwo emahara, zvinodiwa, vanyori uye makomendi.
Gara kumashure apo iwe uchigamuchira vanyoreri, maonero, kufarira uye makomendi!
Iri kundibatsira kusimudzira chiteshi changu…
Uku ndiko kusimudzira kwataida kuti tiise peji redu munzvimbo inoonekera nekukurumidza!
IYO BASA rakakura!
Ndatenda zvikuru vakomana nebasa rakakura kudai! GoViral ndiyo YAKANAKA APP KUNYANYA!
Wanga uri kupi kwegore rapfuura?
Tora Mahara YouTube Views uye Gamuchira Yakakosha Bhizinesi Kudzoka neYouTube Kushambadzira
Uri kutsvaga kuwedzera rako bhizinesi uye kuwedzera rako bhizinesi purofiti? Iwe unofanirwa kushandisa kushambadzira kwevhidhiyo. Hapana yazvino bhizinesi kushambadzira zano rakwana nhasi pasina chirongwa chekushambadzira vhidhiyo. Mushure mezvose, kana zvasvika pakushambadzira zvemukati, mavhidhiyo anonyoresa iwo ma ROI akakwirira. Hazvina mhosva kuti ndezvipi zvinangwa zvako zvekusangana nekushambadzira kwevhidhiyo, iro chiitiko ndechechokwadi kuburitsa.
Vhidhiyo kushambadzira inonyatso kuzivikanwa mumakambani ekutengesa nekuda kwayo kugona kwayo kutyaira vatengi kuita uye kuburitsa inotungamira kune rako bhizinesi. Kana iwe usati wabatanidza kushambadzira kwevhidhiyo muchirongwa chako chekushambadzira zvemukati, inguva yawakadaro. Vhidhiyo kushambadzira iri kungoenda kukwirisa kwakakwirira kumusoro munguva pfupi iri kutevera uye kuita kuti iwanikwe hwakawanda hwekutengesa mabhenefiti kune rako bhizinesi.
Nei uchisarudza YouTube yekutambira yako bhizinesi kushambadzira vhidhiyo zvemukati
Hatigone kutaura nezve mavhidhiyo epamhepo uye tisingataure YouTube. Iyo vhidhiyo inomiririra uye yekugovana webhusaiti zvave zvakafanana ne online vhidhiyo zvemukati. Muchokwadi, vanhu vazhinji havazivi, asi YouTube inoitika kuva yechipiri-inonyanya kufarirwa injini yekutsvaga. Mune mamwe mazwi, iwe une vateereri vakagadzirira pawebhusaiti, uye kurodha kushambadzira vhidhiyo yezvinyorwa paYouTube zvinokubatsira iwe kukwirisa kumusoro maererano neSEO futi. Kuwana maonero eYouTube pane yako YouTube bhizinesi chiteshi kunogona kukubatsira iwe nani kutaridzika kwechiratidzo chako uye nekuvandudza kusvika kwayo. Saka, nei iwe ungangoda kutora chero imwe vhidhiyo inomiririra webhusaiti kuti uise yako yekushambadzira vhidhiyo zvemukati kune?
Inoyerwa data-yakatsigirwa mabhenefiti ekushambadzira kweYouTube
Muchikamu chino, tinotarisa zvakadzama zvese zvakanaka zvaunowana kana ukasarudza YouTube senzvimbo yaunofarira yekugovana mavhidhiyo ekutengesa bhizinesi rako:
Kufungidzirwa kusingadaviriki - YouTube ndiye mambo wevose-kugovana webhu masevhisi. Vashandisi kubva pamazera gumi nemashanu kusvika makumi mashanu neshanu vanowana chikuva nguva dzose. Zvakachengeteka kutaura kuti vhidhiyo inogona kukubatsira kuti uonekwe. Nekudaro, pane toni yevhidhiyo yezvirimo pawebhusaiti, uye iwe unofanirwa kuve unokwanisa kugadzira emhando yepamusoro mavhidhiyo kuti uve nechokwadi chekuti havazorasika mugungwa remavhidhiyo mazhinji akaitirwa ipapo. Kuwana maonero evhidhiyo yako yemukati kunogona kuratidza kuve basa rakaoma. Neichi chikonzero, kana iwe uchigona kuwana nzira yekuwana vakasununguka YouTube maonero kune rako bhizinesi YouTube chiteshi, iwe unofanirwa kuitora zviri nyore.
High traffic - YouTube inonyora yakakwira mushandisi traffic mukati mezuva rese. Yayo mabhiriyoni-akasimba mushandisi huwandu anotarisa anopfuura bhiriyoni maawa emavhidhiyo pane webhu-inomhanyisa magnate. Iyo yemahara vhidhiyo-inomirira sevhisi inokwanisa kusvika kune yakafara huwandu hwevateereri kupfuura terevhizheni tambo. Iyo inopa mabhizinesi ane yakaderera-mutengo wekuparadzira nzira yemavhidhiyo ekushambadzira avanogadzira. Kana ikashandiswa nemazvo, newewo unogona kukanda mabhiriyoni emaonero pane ako evhidhiyo yezvokushambadzira, uchivimbisa rwizi rweiri kuuya bhizinesi reako brand.
Zvichida hutachiona - YouTube inopa mabhizinesi ane yakawanda mikana yekuita yavo yemavhidhiyo zvemukati kuenda hutachiona. Iwe unogona kuisa yako vhidhiyo zvemukati mune akati wandei kushambadzira kutaurirana, senge kuisanganisa iyo yako blog posvo kana kugovera yayo link mune yeLinkedIn hurukuro foramu.
Yakagadziridzwa SEO - Kubva Google payakawana YouTube, injini yekutsvaga inoratidzira mawebhusaiti ane YouTube vhidhiyo yezvinhu kumusoro pane ayo ekutsvaga injini. Mune mamwe mazwi, hakusi chete kuvaka yako vhidhiyo zvemukati zano kutenderedza YouTube kunokubatsira iwe kuhwina maonero ayo anobatsira ako YouTube kushambadzira, asi zvakare zvinobatsira ako akazara edhijitari kushambadzira ekuedza Kana chinzvimbo cheSEO chewebsite yako yebhizinesi chakwidziridzwa, rako rewebhu webhusaiti rinonyoresa pachako-peji maonero.
Kubatanidzwa kuri nyore nesocial media kushambadzira - Hapana chinoshanda zvinobudirira kushambadzira midhiya yemagariro pane kugovana zvemukati mevhidhiyo. Paunogadzira yepamusoro-kukosha kushambadzira vhidhiyo yebhizinesi rako paYouTube, unonakidzwa nekuchinjika kwekugovana naro kune ako enhau mapeji enhau. Vanhu vazhinji vangangoona mavhidhiyo pasocial media mapuratifomu ayo anoonekwa pane avo enhau feeds pane kutsvaga bhizinesi rako chiteshi. Kana ivo vakawana yako vhidhiyo zvemukati zvichidikanwa pasocial media, ivo vanozogovana nyore zvavo neshamwari dzavo uye vavanozivana kuburikidza neyavo ega enhau midhiya anobata. YouTube, saka, inokutendera iwe kuti ubatanidze mabhenefiti ekushambadzira kwevhidhiyo uye kushambadzira midhiya enhau mune imwe yepamusoro-mhedzisiro inotungamirwa kushambadzira zano.
Nyika dzese - YouTube inofarira mukurumbira pasirese. Iri kushanda munyika makumi masere nemasere uye inopihwa mumitauro makumi manomwe nenomwe. Hapana imwe webhu vhidhiyo yekutambira sevhisi inogona kuwedzera ako bhizinesi kushambadzira mavhidhiyo kusvika kwepasirese uko YouTube kunogona. Kana iwe ukawana yemahara YouTube maonero uye nekubudirira kuwedzera maonero-kuverenga emako brand kushambadzira mavhidhiyo paYouTube, iwe unozvipa iine chinotakura chemagariro chirango. Vateereri vanogamuchira zvakanyanya vhidhiyo ine yakakwira kuona-kuverenga kupfuura zvavari kune vhidhiyo inoita kunge yakaonekwa nevanhu vashoma pamberi pavo.
Ungatanga sei nekutengesa kweYouTube
Iye zvino zvawakagadzirira kupaza muYouTube Kushambadzira, isu takafunga kuti iwe unogona kushandisa gwara rekuti ungatanga sei. YouTube Kushambadzira kunogona kuita sekuremera kune vanotanga vasina kushandisa vhidhiyo-inomirira uye yekugovana sevhisi sechishandiso chekushambadzira. Kushanda kweYouTube Kushambadzira kunosanganisira mashoma emabasa anoda kutarisirwa kwako uye kutarisirwa. Iwe unofanirwa kuziva maitiro ekugadzira YouTube chiteshi yemhedzisiro mhedzisiro uye nekugadzirisa mavhidhiyo aunogadzira paYouTube kuti akwirirane pamusoro pemajini ekutsvaga online. Iwe zvakare unofanirwa kunzwisisa maitiro ekugadzirisa uye kushandisa YouTube kushambadzira mishandirapamwe, pamwe nekuongorora mametric akaitwa kuwanikwa neYouTube vhidhiyo analytics.
Pazasi, isu tinogovana zvinongedzo zvekuti iwe ungatanga sei yako YouTube vhidhiyo yekushambadzira rwendo zvinobudirira kuti uwane bhizimusi rako re brand.
Kugadzira nekushandisa bhizinesi YouTube chiteshi
Kana iwe uchida kuwana zvakanaka zvakakwana kubva kune yako YouTube bhizinesi kushambadzira, sarudza iyo Brand Akaunti paGoogle kusaina kuYouTube pane kushandisa yako wega account. ABrand Account ichaita kuti vanhu vazhinji vapinde muakaundi yako YouTube account, uye kwete iye chete munhu akaigadzira. Kana iwe ukashandisa yako pachako Google account, yako YouTube account mushandisi zita rinova iro raunenge watove wakatsanangura iwe pachako paGoogle. Kugadzira uye kugadzirisa akawanda YouTube chiteshi panguva imwe chete inova isina musono chiitiko neBrand Akaundi, iyo iwe yaunobatsirika sezvo rako bhizinesi richikura.
Kugadzira zvemukati zvemukati hazvigone kuitika pasina tsvakiridzo yakakwana. Kana iwe uchida kuti ako mavhidhiyo eYouTube aite nemazvo, dzidza zvishoma nezvehuwandu hwevateereri vako veYouTube. Ndeipi tsika iyo vazhinji vavo vanorumbidza kubva, ndeapi mazera avo, uye ivo vari kusarudza sei kudya zvemukati? Kuzvizivisa neruzivo urwu kunobatsira iwe kuburitsa yakakwira-inoshandura yakanangwa YouTube vhidhiyo yekushambadzira zvemukati. Kana iwe watoburitsa zvirimo zvevhidhiyo pane yako brand YT chiteshi, unogona kushandisa webhusaiti iyo Analytics tebhu kuti udzidze nezve vateereri vako huwandu uye maitiro. Tarisa kuwanda kune vateereri huwandu hwevanhu nevateveri vako pane mamwe maficha enhau. Iyo inofanirwa kukubatsira iwe neyako yakazara kushambadzira zvemukati zvisikwa.
Enzanisa uye ongorora mashandiro echiratidzo chako paYouTube neicho chevanokwikwidza nacho. Tarisa maonero pane avo mavhidhiyo uye nhamba yevanonyoresa pane yavo chiteshi. Iwe unogona ipapo kuseta mabenchmarks ekushanda kwemavhidhiyo eYouTube ekushambadzira zvinoenderana. Iwe unogona zvakare kuda kuona mazwi akakosha avakashandisa uye nerondedzero yemukati yavakapa kukurudzira kwekugadzira mavhidhiyo ako. Izvo zvakati, gara uri wepakutanga munzira yako. Kuchengeta tebhu pamavhidhiyo ari kufamba paYouTube zvakare kuita kwakanaka, izvo zvinokubatsira iwe kuunganidza matipi uye manomano ekugadzira zvemukati-zvemavhidhiyo zvemukati.
Kugadziridza YouTube vhidhiyo zvemukati zvemhedzisiro mhedzisiro
YouTube ndeye vhidhiyo yekutsvaga injini iyo inoronga zvirimo zvichibva pamazwi akakosha, mazita, tsananguro, zvichingodaro, zvakafanana nechero imwe injini yekutsvaga. Kana iwe uchida kuve neyako YouTube vhidhiyo yezvinyorwa zvinowanikwa zviri nyore uye uwane yemahara YouTube maonero nekukasira, iwe uchazoda kukwidziridza mavhidhiyo aunogadzira ekuitira sevhisi. Kurudziro yeYouTube algorithm inoratidza mavhidhiyo kune vateereri zvichibva pane zvavanoda kuona. Iwe unogona kukwirisa kumusoro maonero ekuverenga mavhidhiyo aunogadzira nekuitisa yakakosha kiyi yekutsvaga izwi paYT nekugadzira zvine hukama nemavhidhiyo zvemukati zvemashoko epamusoro-anoita. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuita -
Uyai nezita rakasimba rine mazwi akakosha anozotambirwa zviri nyore neiyo YouTube algorithm. Edza kusave spammy kana kuteedzera tinya-chirauro kunyora kunyora; izvo zvinotungamira zvinotungamira kune yakashata SEO yevhidhiyo yako yeYouTube.
Gadzirisa yako vhidhiyo thumbnail. Vhidhiyo yako thumbnail iri pakati pezvinhu zvekutanga zvinoonekwa nevateereri nezve yako vhidhiyo yeYouTube. Chinhu chinokwezva chinotora maziso chinokurudzira vanhu kubaya uye kutamba vhidhiyo yako yeYouTube zvemukati. Gadzira iyi thumbnail senge yepamusoro-resolution sezvinobvira pamhedzisiro yakanaka.
Nyora yakajeka uye yakapfupika tsananguro yevhidhiyo. Vanhu vane mukana wekutamba vhidhiyo uye vanoramba vachiona kusvika kumagumo kana vakagona kuona kuti nyaya yevhidhiyo inovanakidza. Rondedzero yakakosha-yevhidhiyo yevhidhiyo yako ichaita kuti vhidhiyo yako inyanye kufadza kune vanoiona uye ibatsire kuichengeta kuburikidza nenguva yekumhanya.
Sanganisira maCAA muchimiro chemakadhi, watermark, uye bumper ads. Iwe unoda kuti vateereri veako wekusimudzira YouTube vhidhiyo kuti vatore matanho mukufarira bhizinesi rako. Kunyatsoisa izvi zvinhu muYouTube brand brand kushambadzira vhidhiyo zvemukati zvinogona kupa yako vhidhiyo vateereri iyo Push yavanoda kuti vapinde mune rako bhizinesi rekutengesa fanera.
Kurudzira vateereri vako veYouTube kufarira, kugovana, uye kunyorera mavhidhiyo ako. Inotyaira kubatanidzwa uye inokanganisa chinzvimbo chako muYouTube algorithm zvakanaka.
Anoshanda uye epamusoro-soro anoita YouTube zvemukati zvekushambadzira zano ndeimwe inowanzozviongorora pachayo uye inozvigadzirisa pachayo kuti ienderane nezvinodiwa nevateereri uye zvishuwo. Iyo zvakare inoramba ichienderana neazvino musika maitiro. Paunogadzira chiteshi cheYouTube chebhizinesi rako, uchaita zvakanaka kudhirowa nekutevera purogiramu yekutsikisa vhidhiyo kuronga kwako kushambadzira kwevhidhiyo.
Iwe unogona zvakare kuda kusimbisa zvemukati zvirinani nekuwedzera zvinyorwa kwavari, kuzvironga mumitambo yekutamba, uye kugadzira traira yeYouTube chiteshi. Unogona kusiyanisa yako vhidhiyo yezvinyorwa portfolio paYouTube nekugadzira akasiyana mavhidhiyo kushambadzira brand yako. Semuenzaniso, iwe unogona kurodha yeVatengi Zvakaitika vhidhiyo blog kune yega yega mashoma eanotsanangudza mavhidhiyo aunogadzira ako chiteshi.
Kufuridzira kushambadzira parizvino kuri kunyoresa kubudirira kukuru. Iwe unogona kusunga kubatana neakakurumbira maYeTubers kuti uwedzere zita rako reYouTube vhidhiyo chiteshi kana kuve neanonyanya kukurudzira vanogovana mavhidhiyo ako pane mamwe magariro enhau. Icho hunyengeri hwekushandisa inofarirwa-YouTube chiteshi ndeye kuongorora mashandiro evhidhiyo yako yeYouTube zvirimo nguva nenguva uye nekuita shanduko sezvaunoda kuigadziridza pamwe nenguva. Maturusi akati wandei, akadai seCanva neChannelview, anowanikwa online, ayo anogona kubatsira nekuvandudza kushambadzira kwako. Kana iwe uchida kukwidziridza yako vhidhiyo kushambadza paYT, unogona kufunga kuvashandisa zvakare.
Kupfupisa, kushambadzira kweYouTube kunoratidzika kunge kusingaite-kana iwe uchifunga kupinda munyika yekutengesa vhidhiyo. Nepo paine akati wandei mavhidhiyo ekugadzirisa uye ekugovana masevhisi anopihwa mahara pamhepo senge Vimeo uye DailyMotion, hapana anogona kukwikwidza kusvika uye nyore-kwekushandisa kunopihwa neYouTube. YouTube inopa yepasirose inozivikanwa vhidhiyo yekutambira uye yekugovana webhusaiti neyakareruka, isina-kunetsa interface iyo iyo kunyange vatangi vechinzvimbo vanogona kushandisa kuisa yavo vhidhiyo zvemukati. Nhasi, YouTube ndeimwe yemawebhusaiti anonyanya kushandiswa mune ese midhiya midhiya. Iwe unozoita mushe nekusunga kugona kwayo kusvika kune vakawanda vateereri vechiratidzo chako.
Tatsanangura pamusoro pematanho ese aunogona kuteedzera kugadzira inobudirira YouTube yekushambadzira zano kune rako bhizinesi. Kana iwe uchifunga kuti unozobatsirwa nerubatsiro rwakawedzerwa mukumisikidza rakabudirira YouTube bhizinesi chiteshi, wauya kurudyi nzvimbo. Tora mahara YouTube maonero uye kusimudzira yako bhizinesi vhidhiyo kushambadzira munzira yakanakisa inogoneka. Kana iwe uchida kuti vateereri vako vatarisire kune zvemukati zvakagadzirwa neyako kadhi yeYouTube chiteshi, iwe unogona kutarisira pane yedu ruzivo uye hunyanzvi kubatsira. Kukura vateereri vako veYouTube uye vako bhizinesi vatengi mune iwo mumwe mweya!
Iwe une mubvunzo nezve GoViral? Ona rondedzero pazasi yemibvunzo yedu inowanzo bvunzwa. Kana mubvunzo wako usina kunyorwa pano, ndokumbira utibate.
Simply nyoresa, ipapo Login uye shanyira chikamu che "Earn Coins" kuti utange kuona mavhidhiyo. Vhidhiyo yega yega yaunotarisa, senge, kupindura uye kunyorera pane inokuwanisa mari.
Paunenge uchinge uine mari yekushandisa, pinza mavhidhiyo ako muchikamu che "Mavhidhiyo angu" uye sarudza huwandu hwevanyori, maonero, zvavanofarira uye makomendi aunoda kugamuchira pane yega vhidhiyo.
Endesa maodha ako uye ugare pasi apo network yedu inonunura zvese!
Ramba uchiwana mari yemahara kuitira kuti ugone kuraira mamwe masevhisi kumavhidhiyo ako, kana kushanyira "Tenga Mari" kuti utenge iwo pachinzvimbo.
Iwe une chirongwa chekuendesa?
Ehe, tinodaro! Simply Login uye shanyira "Koka & Gamuchira Zvimwe" kuti uwane yako yakasarudzika yekuendesa URL.
Wese munhu waunoreva kunetiweki yedu inonyoresa account uye inowana mari inowana iwe 10% Commission.
Izvi zvinoreva, kana iwe uchinongedzera vanhu gumi avo mumwe nemumwe anowana chiuru chemari (zviuru gumi zvemari), iwe unozongopihwa mubairo ne10% yeiyo, inova chiuru chemari.
Kureva vashandisi kuGoViral ndiyo nzira yakapusa uye isinganetsi yekuti iwe ugare wawana mari kubva kune zvaunoedza kutumira.
Maitiro akanakisa ekureva vashandisi neako akasarudzika URL anosanganisira:
1. Tumira vhidhiyo yeYouTube nezveGoViral.
2. Email / meseji shamwari dzako nevatinoshanda navo vane zvakare YouTube nzira.
3. Nyora blog posvo nezve GoViral pane yako webhusaiti.
4. Goverana yako yakasarudzika yekuendesa URL paFacebook, Twitter uye mamwe masocial platforms.
5. Shoko remuromo.
6. Ita zvekugadzira! Kune nzira dzisingaverengeke dzaunogona kuendesa vashandisi kuGoViral!
Unokurumidza sei kuendesa masevhisi?
Ese masevhisi anounzwa nemambure edu akanyatso zadziswa nenharaunda yevanyoresa GoViral vashandisi vanopedzisa zviito kuti vawane mari. Izvi zvinoreva kuti kumhanyisa uko kunopihwa sevhisi yega kwakasiyana zvinoenderana nemugwagwa watinogashira, pamwe nemirairo iri munharaunda medu chero nguva. Dzimwe nguva dzinonunurwa nekukurumidza uye dzimwe nguva dzinoendeswa nekunonoka.
Kana iwe uchida kuti maodha ako aunzwe nekukurumidza, iwe unofanirwa Login uye shanyira iyo "Nhengo" peji, uko iwe kwaunogona kukwidziridzira kune iyo Goridhe kana Platinum zvirongwa zvemubhadharo uye kugamuchira "Zvinotarisirwa Zvakatengwa".
Zvirongwa zveGoridhe nePlatinamu zvichaisa mavhidhiyo ako pamberi pevamwe kuti vagamuchire masevhisi nekukurumidza!
Yekupedzisira Blog Blog
Maitiro ekusarudza Yakakwana Mumhanzi Background kune Yako YouTube Vhidhiyo?
Kana vanhu vachifunga nezvemavhidhiyo, vanonyanya kufunga nezve zvinoonekwa. Nekudaro, chokwadi ndechekuti mavhidhiyo haasi ezve zvinoonekwa - odhiyo inoita basa rakakura mu...
Zvikonzero Zvishanu Nei YouTube Ichifanira Kuve Yako Yekutanga Akaunti Yemagariro
Kusvika makore mashoma apfuura, vatengesi vazhinji vangadai vasina kufunga nezveYouTube patsoka imwechete sezvinodiwa neFacebook, Instagram, uye Twitter. Zvisinei, nguva dzine...
Maitiro eKupa Mumwe Musiki nekuda kweKufemerwa kwavo kweVhidhiyo Yako?
YouTube izere nevagadziri vezvinyorwa zvinokurudzira, uye hazvina kuipa kubatanidza zvevamwe mumavhidhiyo ako. Nekudaro, kana uchinge wadaro, zvakakosha kuti uverenge iyo ...
Isu Tinopa Zvimwe Zvakawanda Zvekushambadzira YouTube
Huduma dze YouTube Twitter Services Twitch Services Pinterest Services Spotify Services SoundCloud Services
Views Subscribers Comments zvaanofarira Tarisa Maawa Embed mugove
Followers Chiteshi Views
Plays Vanotamba Vanotevera Followers
Plays Downloads Followers zvaanofarira Comments Dzokororo
Kudada Kushumira zviuru zveVashandisi veYouTube
Tarisa uone GoViral mushandisi kuongororwa uye kwavo ruzivo
Nyeredzi shanu webhusaiti! Iyo webhusaiti inoshanda zvakanyanya uye ese maitiro acho akachengeteka chaizvo uye akachengetedzwa. Kana iwe uchitsvaga sevhisi iyo inogona kubatsira kuwana Mahara YouTube Maonero, Anofarira, Vanyoreri uye Makomendi iwe uri munzvimbo chaipo. Unogona kuvimba GoViral 100%
Kutenda kukuru! Basa rakanaka! Kutenda kuna GoViral ini ndinogara ndichiwana Mahara YouTube Views. Ndinoshuva dai ndaigona kuwana GoViral pakutanga, zvaizoita kuti hupenyu hwangu huve nyore.
by FAMBI YEMAHARA
Ingoda iyi webhusaiti uye iwe unogara…
Ingoda iyi webhusaiti uye iwe unogara uchiwana vanyoreri uye vanofarira uye maonero ndapota tanga kushandisa ino webhusaiti iwe uchada iyo webhusaiti.
Joinha yedu yemahara network uye tanga kuwana maonero, kufarira, kunyoresa uye makomendi nhasi!
Mabhenefiti ekugadzira Trailer yeYouTube Channel yako
Mazano ekudzivirira Kuwana Kusafarira paYouTube Vhidhiyo